Video: Myaw Sin Gyun A Nyeint @ Kan Daw Gyi Park | Myanmar Celebrity Gossip & News
Video: Myaw Sin Gyun A Nyeint @ Kan Daw Gyi Park
This is the video of Myaw Sin Gyun Anyient which was held on 29 October 2011 at Myaw Sin Gyun, KanDawGyi Park, Yangon. Comedians; Godzilla, Kin Kaung, Kyaw Htoo, Sein Thee and Zee Thee, Dancers; Chaw Su Myo and Thit Thit Lwin performed for this entry-fee-free Myaw Sin Gyun Anyeint.
အောက်တိုဘာလ (၂၉) ရက်နေ့ ကန်တော်ကြီး၊ မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မျှော်စင်ကျွန်းအငြိမ့်ပွဲ ဗီဒီယို Myaw Sin Gyun A Nyeint Video on Youtube
Nay Soe LatNovember 2, 2011 at 1:56 AMall good !ReplyDeletekeep up friendsNovember 3, 2011 at 1:16 AMဘာလို့ အကုန်မတင်တာလဲဗျာ ပြတ်တောက်ပြတ်တောက်နဲ့ReplyDeleteming mingNovember 3, 2011 at 7:55 PMI can't believeReplyDeletetapaungthiNovember 4, 2011 at 2:14 AMဘာမှလည်း ကြည့်လို့မရဘူး ကော်နက်ရှင်နှေးနေတာနဲ့ ပြီးတော့ ဒေါင်းလည်းမရဘူးအစအဆုံးဒေါင်းချင်လို့ ကူညီပါဦးနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ReplyDeleteHtet Aung ShineNovember 4, 2011 at 4:30 AMထစ်နေတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကြံပေးပါလား။ဒါဆိုတော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းမှာဗျReplyDeleteမင်းသားNovember 5, 2011 at 6:57 PMကောင်းတယ်ဗျာပြောထားတာတွေReplyDeleteမင်းသားNovember 5, 2011 at 7:01 PMကျွန်တော်ကအဲလိုအငြိမ့်တွေးဘဲကြည်သာReplyDeleteHtat AungNovember 6, 2011 at 7:07 AMလေးစားတယ်သူငယ်ချင်းတို့ ဆက်လက်ပြီးကျိုးစားကြပါကွာအစဉ်အားပေးနေတယ် အမေရိကားမှာလဲ အေးပေးခဲ့ပါတယ် အောင်မြင်ကြပါစေReplyDeletedardarNovember 15, 2011 at 12:02 AMကောင်းတယ်ဗျာပြောထားတာတွေReplyDeleteeilayJanuary 19, 2012 at 2:34 AMi love that so much ....so cute sweetyReplyDeleteeilayJanuary 19, 2012 at 2:41 AMသူများတွေကမကောင်းဘူးပြောတယ်..........ကြိူးစားပါနော်.....အဲလိုပြောတာကိုမခံနိုင်လို့..i love your Group so much...and dancerReplyDeletemy loverMay 15, 2012 at 11:31 PMGood job ! Carry on guy .ReplyDeleteAdd commentLoad more...